Iji Outlook kewaa nnukwu PST faịlụ n'ime obere faịlụ - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Iji Outlook kewaa nnukwu PST faịlụ n'ime ndị pere mpe
Iji Outlook kewaa nnukwu PST faịlụ n'ime ndị pere mpe
Ebe ọ bụ na Outlook 2003, ọ ga-ekwe omume ijikwa ọtụtụ faịlụ PST na ogwe aka ekpe aka ekpe nke Outlook, n'ihi ya ị nwere ike iji Outlook kewaa nnukwu faịlụ PST n'ọtụtụ obere, dị ka ndị a:
Nke mbu, mee nkwado ndabere na mbụ PST faịlụ gị maka nchekwa.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịma nha faịlụ PST buru ibu na ọnụọgụ ọnụọgụ nke faịlụ ndị gbawara na ịchọrọ ịmepụta iji nabata ọdịnaya nke nnukwu faịlụ PST.
Dị njikere na nnukwu faịlụ PST mbụ mepere ma nwee ike ịnweta ya na ngalaba aka ekpe.
Mepụta ọtụtụ faịlụ PST ọhụrụ efu dị ka faịlụ ndị gbawara. Faịlụ ndị a kwesịkwara ịnwetanwu na akụkụ aka ekpe aka ekpe.
Mee atụmatụ nke ihe ịchọrọ itinye na faịlụ nkewa izizi, wee họrọ ha na nnukwu faịlụ PST, wee bugharịa ha na faịlụ nkewa izizi.
Lelee nha nke mbụ gbawara n'etiti faịlụ. Ọ bụrụ na nha ya dị mma, ị nwere ike ịga n'ihu na faịlụ nkewa ọzọ, ma ọ bụghị, ịnwere ike ịkwaga ihe ndị ọzọ site na faịlụ PST buru ibu na faịlụ nkewa izizi ọzọ.
Tinyegharịa nzọụkwụ 7 ruo mgbe nha nke faịlụ izizi mbụ ruru nha anya.
Mgbe i mechara ihe mbụ gbawara n'etiti faịlụ na kwesịrị ịga na-esote onye.
Tinyegharịa nzọụkwụ 6 ruo 9 ruo mgbe a gafere ihe niile dị na faịlụ PST buru ibu na faịlụ ndị gbawara.
Enwere ụfọdụ ọghọm n'iji Outlook kewaa nnukwu faịlụ PST:
Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu na-akwado ime nke a. Maka Outlook 2002 ma ọ bụ nsụgharị dị ala, ebe onye ọrụ enweghị ike ịnweta ọdịnaya nke ọtụtụ faịlụ PST n'otu oge, ịnweghị ike kewaa na usoro dị n'elu.
Ga-enwerịrị ike ịnweta ọdịnaya dị na nnukwu PST faịlụ site na Outlook. Ọ bụrụ na faịlụ PST gị rụrụ arụ ma ọ bụ enweghị ike imeghe n'ihi 2GB oversized nsogbu, mgbe ahụ, ịnweghị ike iji usoro dị n'elu.
O siri ike ijikwa nha faịlụ PST gbawara agbawa. Kwesịrị ịnwale ọtụtụ oge ruo mgbe ọ ga-emezu ihe ị chọrọ.
na DataNumen Outlook Repair, ị nwere ike kewaa nnukwu PST faịlụ ka nta ndị na-akpaghị aka, na-enweghị nchegbu gbasara nsogbu ndị a niile dị n'elu.